Nhau - Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Nezve Fibre Optic Media Shanduri
Nekukura kuri kutarisirwa kwekutaurirana kwanhasi, vashandisi venetiweki vanofanirwa kusangana nekuenderera mberi mukuwedzera kwedata traffic uye kuwedzera kudiwa kwebandwidth nepo vachishandisa zvakazara kudyara mune iripo network network. Panzvimbo pekukwiridzira kunodhura uye rewiring yefibhi, fiber optic midhiya vanoshandura inopa inodhura-mhinduro mhinduro nekuwedzera hupenyu hweiyo iripo yakarongedzwa kabling. Iyo fiber optic media converter inogona sei kuita izvi? Uye iwe unoziva zvakadii nezvazvo? Nhasi, ichi chinyorwa chinokuudza iwe chimwe chinhu nezve fiber optic midhiya inoshandura.
Chii chinonzi Fiber Optic Media Converter?
Fiber optic media converter ingori nyore netiweki mudziyo iyo inogona kubatanidza maviri akasiyana midhiya mhando senge yakamonyaniswa peya ne fiber optic kabling. Basa rayo kushandura chiratidzo chemagetsi chinoshandiswa mumhangura isina kuvharika yakakomberedzwa (UTP) network kabling mumafungu emwenje aishandiswa mu fiber optic cabling. Uye fiber optic midhiya inoshandura inogona kuwedzera kufambisa daro pamusoro pefibre kusvika 160 km.
Sezvo fiber optic kutaurirana kuchichinja nekukurumidza, fiber optic media converter inopa yakapusa, inochinja, uye yehupfumi kutama kune ramangwana-chiratidzo fiber optic network. Iye zvino yave ichishandiswa zvakanyanya mu - dzimba nzvimbo, kubatana kwenzvimbo uye kunyorera kwemaindasitiri.
Akajairika Mhando dzeFibre Optic Media Converter
Vashanduri vemazuva ano vanotsigira akawanda akasiyana data data kutaurirana anosanganisira Ethernet, PDH E1, RS232 / RS422 / RS485 pamwe nemhando dzakawanda dzemakombi senge dzakamonyaniswa jozi, multimode uye imwechete-modhi fiber uye imwechete-tambo fiber optics. Uye ivo vanowanikwa nemhando dzakasiyana mumusika zvinoenderana nezvirongwa. Mhangura-kune-fiber midhiya inoshandura, fiber-kune-fiber midhiya inoshandura uye serial-kune-fiber midhiya inoshandura ingori chikamu chavo. Heino sumo pfupi kune aya akajairwa marudzi e fiber optic media converter.
Kana iyo nhambwe pakati pemidziyo miviri yeneti inodarika chinhambwe chekutapurirana chendarira cabling, fiber optic yekubatanidza inoita mutsauko mukuru. Mune ino kesi, mhangura-kune-fiber shanduko uchishandisa vezvenhau vashanduri inogonesa maviri eneti michina ine mhangura madoko kuti abatanidzwe pamusoro akareba madaro kuburikidza nefibre optic kabling.
Fiber-to-Fiber midhiya inoshandura inogona kupa kubatana pakati peimwe-modhi uye multimode tambo, uye pakati peviri fiber uye imwechete-modhi fiber. Kunze kwezvo, ivo vanotsigira kutendeuka kubva kune imwe wavelength kuenda kune imwe. Iyi media inoshandura inogonesa kureba kubatana pakati peakasiyana fiber network.
Serial-to-fiber midhiya vashanduri vanobvumira RS232, RS422 kana RS485 masaini kuti apfuudzirwe kuyambuka fiber fiber optic chinongedzo. Ivo vanopa fiber yekuwedzera ye serial protocol mhangura yekubatanidza. Uye zvakare, serial-kune-fiber midhiya vashanduri vanogona kuona chiratidzo baud mwero wekubatanidza izere-duplex serial madhijitari otomatiki. RS-485 vashanduri vefibre, RS-232 vashanduri vefibre uye RS-422 vashanduri vefibre ndiwo marudzi akajairwa e serial-kune-fiber midhiya vashanduri.
Matipi Ekusarudza Fiber Optic Media Shanduri
Isu tave neruzivo nemhando dzakajairika dzefibre optic midhiya vashanduri, asi maitiro ekusarudza rakakodzera harisi basa riri nyore. Heano mamwe matipi akareruka ekuti ungasarudza sei inogutsa fiber optic media converter.
1.Ratidza pachena kana machipisi eiyo fiber optic media converter inotsigira ese hafu-duplex uye yakazara-duplex masystem. Nekuti kana iyo midhiya inoshandura machipisi ichingotsigira hafu-duplex system, inogona kukonzeresa kurasikirwa kwedata kana yaiswa kune mamwe masisitimu akasiyana.
2.Make kujekesa iyo data rate yaunoda. Paunosarudza fiber optic media converter, unofanirwa kuenzanisa kumhanya kwevanoshandura pamativi ese. Kana iwe uchida zvese zvinomhanya, iwe unogona kutora maviri mwero midhiya vashanduri mukutarisa.
3.Buritsa pachena kuti midhiya inoshandura inoenderana neyakajairwa IEEE802.3. Kana ikasasangana neyakajairwa, pachave nenyaya dzekuenderana zvachose, izvo zvinogona kukonzera matambudziko asina basa pabasa rako.